Yakagadziriswa mari uye inoshanduka mari | Ehupfumi Zvemari
Susana Maria Urbano Mateos | | Mari
Kuisa mari yedu nenzira kwayo kunoda kuti tigare tichifunga pfungwa dzakasiyana dzinozotibatsira kusarudza sarudzo dzakakodzera shandisa mari yedu. Pfungwa mbiri dzatinowana kazhinji kazhinji ndedze Yakagadziriswa Mari uye Inoshanduka Mari. Kuti tizvinzwisise nenzira kwayo tinofanirwa kujekesesa pamusoro pemifungo inotevera:
1 Chii chinonzi purofiti yemari?
2 Zvinorevei kuisa mari?
3 Zvinorevei mwero wekusava nechokwadi?
4 Ndeipi njodzi yezvemari?
5 Iyo Fixed Income inoshanda sei?
6 Mari Inoshanduka inoshanda sei?
7 Nzira yekusarudza mhando yemari inotikodzera zvakanyanya?
Chii chinonzi purofiti yemari?
Tinogona kutsanangura Mari yemari sehukama hwehukama huripo pakati pezvakanaka zvatinowana pane investment yemari yako. Pfungwa iyi inonyanya kukosha kune vadyidzani uye varidzi vekambani sezvo iri iyo inoratidza kuti imarii yavanowana mushure mekudyara.
Mune ino kesi pfungwa inoshanda kune yakatarwa uye inoshanduka mari uye inoreva mabhenefiti (kana mari) inogadzirwa nezvimwe zvemari zvinhu zvakaita semasheya, mabhondi kana mabhiri. Musiyano uripo pakati pezviviri une chekuita nevatengesi vane njodzi pavanotora imwe yevaviri.
Zvinorevei kuisa mari?
Kuisa mari zvinoreva kuisa mari yedu mumidziyo yakasiyana yemari kuitira kuti vagadzire purofiti yemari. Izvi zvinotanga kubva pane fungidziro yekuti muzvinashawo ndiye munhu anosarudza isa mari yako (kana capital) mune chimwe chezvigadzirwa zvemari zvinowanikwa mumusika uye zvinonyatsoenderana nezvatinoda.
Muenzaniso weizvi ndewe zviito, chinova chiridzwa chemari nekuti kuti makambani ashande zvinoda vadyidzani vanobatsirana avo vanopa mari inodiwa kutanga kana kuramba vachishanda. Iyo inowedzera kubudirira kambani, inowedzera iwo mibairo yevanodyara mari uye inowedzera iyo purofiti.
Zvinorevei mwero wekusava nechokwadi?
Kusava nechokwadi ndiko kunoitika mumamiriro ezvinhu umo mukana weimwe chiitiko usingazivikanwe zvizere. Mune zvemari inyaya inoshandiswa zvakanyanya nekuti varimi vanotsvaga kuve neese anodikanwa madhata nemaitiro ekuderedza zvakanyanya sezvinobvira iyo mwero wekusava nechokwadi kwezvemari zviridzwa.
Ndeipi njodzi yezvemari?
El zvemari ngozi Iyo inogona kutsanangurwa se mukana wekuti chiitiko chinoitika umo isu tinorasikirwa nemuzinda wedu kune hukuru kana hudiki padanho. Inosanganisira zvese kuwana zvishoma pane zvaitarisirwa mhedzisiro, kunyangwe kuenda kusvika pakurasa zvachose iro capital. kuvapo mhando dzakasiyana dzenjodzi uye isu tinofanirwa kufunga nezvese tisati tasarudza kwekuisa mari.
Ngozi yemusika: Ndiyo imwe inosanganiswa nekuchinja-shanduka mumisika yemari.
Ngozi yechikwereti: Iko mukana wekuti mumwe wemapato muchibvumirano haatore zvisungo zvake.
Liquidity njodzi: Iyo ndiyo iyo inofungidzira kuti mumwe wemapati muchibvumirano anogona kutadza kuwana mari inodiwa yekutora zvisungo zvake kunyangwe iine zviwanikwa zvekuzviita.
Kushanda njodzi: Ndiyo njodzi inofungidzirwa nekukwanisa kuitika kwekurasikirwa kwemari kunokonzerwa nekundikana mumaitiro, vanhu, masisitimu kana tekinoroji, pamwe nezvimwe zviitiko zvisingafanoonekwi.
Iyo Fixed Income inoshanda sei?
Kuti kuve ne fixed income Iwe unofanirwa kuziva pamberi peiyo mari inoyerera iyo ichaiswa mari. Kuti izvi zvikwanisike, vanofanirwa kunge vari mari dzine nhoroondo yezvakaitika kana matanho chaiwo ekufanotaura. Muizvi mhando yemari pinda zvese izvo zviwanikwa zvemari uye kuchengetedzeka senge zvisungo, zvivimbiso, mabhiri uye zvisungo. Zvakare wira muchikamu ichi dzimba dzekurenda uye masystem ekuchengetedza s maakaunzi ekuchengetedza uye nguva dzekuisa
In the musika wezvemari, Kutenga kwekutenga kwezvemari izvi zvisati zvaitika, kutaurirana kwekutanga kunodiwa kuti vabvumirane pamamiriro uye hunhu. Izvo zvinofanirwa kutariswa kuti kuwana chinhu chakatemwa chemari tinofanirwa kunge takagadzirira kudyara mari zhinji, nekuti iyo chikamu chekudzoka ishoma kwazvo, chete nekudyara mari zhinji ndipo patinozoona mibairo yakawanda mukuchengetedza kwedu.
La kusagadzikana kwemari yakatarwa ndeyekuti purofiti inogadzirwa yakadzikira zvakanyanya kupfuura iyo yemari, asi nemukana wakakura wekuti njodzi yekurasikirwa nezvose kana chikamu chemari yakachengetwa yakaderera zvakanyanya. Ichi ndicho chikonzero zvichinzi mu mari yakatarwa padanho rekusava nechokwadi Izvo ishoma, sezvo inotarisirwa muzana yemhindu yaimbozivikanwa uye kushanduka kweizvi kunenge kusipo.
Kazhinji, mari yakatarwa inoenderana nemamiriro akasiyana kuwanikwa kwemari. Ndosaka patinofunga kuisa mari mune izvi mhando yezviridzwa zvemari isu tinofanirwa kuziva kuti ndeyekugara kwenguva refu. Izvi zvinonyanya kubatsira mumasangano ekuchengetedza mari kana zvirongwa zvepenjeni.
Mari Inoshanduka inoshanda sei?
Kune rumwe rutivi, equities Iyo ndiyo inoitika mukudyara umo iyo nzizi dzemari izvo zvichagadzira mashandiro. Izvi zvinogona kuve zvakakwirira kwazvo kana zvakadzika kwazvo, kana kunyangwe zvakashata, sezvo zvichitsamira pane akasiyana macroeconomic uye microeconomic zvinhu, senge kuita kwekambani, maitiro emusika kana shanduko yehupfumi.
Mimwe mienzaniso yeiyo Equity matanda, mutual mari uye zvinoshandurwa zvisungo. Kunyange chiri chokwadi kuti kazhinji equity investments kuunza purofiti yakakura, isu tinofanirwa kufunga kuti vanopa njodzi huru. Mari yeEquity inowanzo kuve pfupi uye yepakati izwi. Kuti uvashandise iwe unofanirwa kuve neyakagadzikana mafungiro ekushandisa mari yedu nekuchenjerera.
La equities dzine mwero wakakwirira wekusava nechokwadi, sezvo iyo microeconomic kana macroeconomic dhata iyo inogona kukanganisa kuvandudza kwekambani, uye nekudaro, kubudirira kwayo kwekutengeserana uye kwemari, hazvizivikanwe. Nezve iyo nguva yekuchinjisa ichi chemari chigadzirwa, isu tinoona iyo miniti neminiti yakawanda inotengeswa equities yakanyorwa pamusika wemari. Humwe hunhu ndewekuti murudzi urwu rwekudyara tinogona kudyara chero huwandu hwemari, kubva padiki kwazvo kusvika kumitengo inodarika mamirioni.
Nzira yekusarudza mhando yemari inotikodzera zvakanyanya?
Iri izwi rinodaidzwa Njodzi-Kubatsira zvishoma iyo inotaura kuti iyo yakakwira njodzi, iyo inowedzera kuita purofiti. Pakutanga kuona, tinogona kufunga kuti mune ino nyaya chinhu chinonzwisisika ndechekuti munhu wese aise mari mumari inoshanduka yavanowana imwe purofiti. Zvisinei, iyo njodzi chinhu inotitaurira kuti mikana iri pamusoro yekuti mari yakaiswa mari ichanyangarika zvachose. Ndicho chikonzero ichi kuti vanhu vazhinji vanosarudza yakagadziriswa mari, mune iyo njodzi zero kana diki kwazvo.
Chimwe chinhu chatinofanira kufunga nezvacho pakusarudza a chishandiso chemari ndiko kunyaradzwa uko mumwe nemumwe wavo kwaanotipa. Kana chinhu chakanakira isu kuve nechokwadi chekuti tichava nemari hombe nguva yekudyara yapera, zvakanakisa kusarudza imwe mari yakatarwa inobvumidza iwe kuti uwedzere mari kuburikidza nechizvarwa chezvido. Muchirongwa ichi tinokwanisa zvakare kukanganwa nezvemari yakaiswa mari uye torega ichikura yoga.
Nekudaro, ivo vanhu vane ruzivo rwakakura nezve mashandiro eiyo zviridzwa zvekudyaraIvo vane nyaradzo yekukwanisa kuwana yakawanda mari mukati menguva pfupi chero sekushanda kwavakaisa mari kwave kuri kubudirira. Vanhu ava havazive chete kusarudza idzo investments izvo zvinounza imwe purofiti, asi ivo zvakare vanoziva maitiro ekuita kune imwe nguva ye kurasikirwa nemari kuti uhwine zvakare uye uwane iyo shoma yekurasikirwa inogoneka.
Nenzira iyi tinogona kugumisa kuti zvese zviri zviviri mhando dzekudyara vane zvakakosha zvakakosha maererano ne kuita uye kushomeka. Chinhu chakabudirira kwazvo kuongorora mamiriro ezvemari atinozviwana toona kuti zvatiri kuda imari yatisingamhanye kudzoreredza mari yedu chero bedzi tiine chokwadi chekuti ichave iriko, kana isu tinoda kuwana yakakwira mari mukati menguva pfupi tichiziva kuti izvi zvinogona kutitungamira kurasikirwa neyedu mari, kunyangwe zvingave zvidiki kana zvikuru.
Iyo inokurudzirwa zvakanyanya ita mari muzviridzwa zvese zviri zviviri mari yakatarwa uye mari inoshanduka, kunyatsoongorora mamiriro ese ezvinhu usati waita sarudzo. Vazhinji vatengesi vane zvakagadziriswa mari zviwanikwa zvemari Iyo yavanodyara nenzira yakarongeka uye yakagadzikana uye nguva nenguva vanotora njodzi dzemari inoshanduka. Kuva nechikwata chakasiyana-siyana kunotibatsira kuitira kuti mari yedu isavimbe zvachose nechiridzwa chemari chimwe chete, chero bedzi tiine ruzivo uye ruzivo rwakakosha kuti tiise njodzi kudyara zvine hungwaru muchiyero chekudyara, tichiziva kuti pane njodzi inofanirwa fungidzirwa uye uve nehurongwa hwekuita kuitira kurasikirwa nemari.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Mari » Yakagadziriswa mari nezvikwereti
Ndeapi masheya ane njodzi pamusika? Zvimwe zvirevo